७७ जिल्लामा नै फैलियो कोरोना, कुल संक्रमितको संख्या १२ हजार
रमन वन असार १३ हलेसी एफ एम, पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ५ सय ५४ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । आज रसुवामा ९ जना कोरोना सङक्रमित थपिएसँगै मुलुकका सबै जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस जाकारीमा रसुवामा ८ पुरुष र १ महिला गरी ९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा सङ्क्रमितको सख्ंया १२ हजार ३ सय ९ पुगेको छ । आज कैलालीका एक जना ५० वर्षका पुरूषको मृत्यु भएको पनि डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
असार ११ मा ती पुरूषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । उनको भरतपुर अस्पतालमा निधन भएको हो । यससंगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ । यस्तै आज १ सय ३६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।